काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो, के के गर्न पाइने? (आदेश सहित) | समाचार
June 22, 2021 NepstokLeaveaComment on काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो, के के गर्न पाइने? (आदेश सहित)
वर्कशप दैनिक बेलुका ७ बजेसम्म खोल्न पाइने छ ।
पछिल्ला केही साता यता कोरोना संक्रमणको दरमा केही कमी भने आएको छ ।
के गर्न पाइने, के नपाइने? विस्तृत विवरण तलको आदेशमा हेर्नुहोस् (नोट : तीनै जिल्लाका आदेश एकै खालका छन्) :
आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने खतरनाक रोग ब्ल्याक फङ्गस महामारी घोषणा, ९ हजार बढी बिरामी भेटिए